Wasaaradda Amniga oo war ka soo saartay lacagtii faraha badneyd ee lagu qabtay Garoonka Muqdisho | Awdalmedia.com
Wasaaradda Amniga oo war ka soo saartay lacagtii faraha badneyd ee lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa war saxaafadeed ka soo saartay lacag fara badan oo ku jiray illaa saddex boorso, kaasoo shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in lacagta la qabtay ay gaareysay 9,6 milyan, isla markaana ay socoto baaritaan ku aadan halka ay ka timid, meesha ay u socotay, cida wadatay iyo dantii laga lahaa.
Lacagta ayaa ku jirtay illaa saddex boorso, waxaana shalay la wareegay ciidamada ammaanka, iyadoo lacagta la geeyay Bankiga Dhexe.
Diyaaradda lacagta keentay ayaa ka timid dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, waxaana xilligii la qabanayay ku sugnaa garoonka Diblomaasiyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta oo uu ka mid ahaa Safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Al Cusmaan.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka